Niato herintaona aho tamin'ny kaonferansa, ity no nitranga | Martech Zone
Niato herintaona aho tamin'ny kaonferansa, ity no nitranga
Alatsinainy Martsa 20, 2017 Asabotsy 10 Febroary 2018 Douglas Karr
Ny roa ambin'ny folo volana lasa izay no be atao indrindra amin'ny tantaran'ny orinasa. Namerina nanoratra ny famoahana Martech izahay, nifindra ny biraonay taorian'ny 7 taona, ary nanangana ny serivisinay tamim-pahatsorana. Nanapa-kevitra ny handingana ny fihaonambe aho mandritra ny taona mba hifantoka amin'ny orinasa. Raha ny marina dia tsy nanao dia nankany Florida mihitsy aho nandritra ny fotoana manontolo, izay tiako ny miala sasatra sy mitsidika an'i Neny. (Tsy dia faly tamin'io i Neny!)
Talohan'ity vanim-potoana ity dia niresaka tamin'ny saika isaky ny fihaonambe lehibe momba ny varotra tany Amerika Avaratra aho ary niresaka tany ampitan-dranomasina koa. Raha ny marina, ny iray amin'ireo kaonferansa tiako indrindra dia mitranga ankehitriny - World Marketing Marketing Tontolo. Tena tiako ny miteny amin'ny kaonferansa - manome hery ahy izany ary mifankahita amin'ny maro aminareo izay manana fifandraisana nomerika aho nefa tsy mbola nihaona mivantana. Te hizara ny fiantraikan'izany tamiko sy tamin'ny orinasako aho.
Skipping Konferansa Marketing - Ny tsara
Mahaliana, taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia ankamaroan'ny mpanjifa avy any ivelan'ny afovoany andrefana. Nanana mpanjifa manerana ny morontsiraka sy marika marika tena lehibe dia lehibe izahay. Na dia niasa tsara aza ny teti-bolan'ny morontsiraka tamin'ny tapaky ny andrefana, dia nitolona izahay mba hitazomana ireo fifandraisana ireo.
Androany, ny mpanjifanay rehetra dia eo afovoany andrefana ary manana fifandraisana tsara amin'izy ireo. Raha sendra olana izy ireo dia mitsambikina ao anaty fiara fotsiny aho ary mitondra fiara hanampy azy ireo. Tsy tena safidy amin'ny mpanjifa any ivelany. Noho izany, raha te-hanana fanatrehana mahavariana ao an-trano ianao, ny fanatrehana fihaonambe marketing dia tsy tena ilaina.
Rehefa mijery ireo namako mifaly amin'ny kaonferansa an-tserasera aho dia mifangaro fihetseham-po. Tsy mahafinaritra ny mijery ny aretin'andehan'ny dia sy ireo fianakaviana tavela. Tsy malahelo ny seranam-piaramanidina aho, miaina ivelan'ny valiziko, ary ny fotoana lavitra ny asa sy ny fianakaviana.
Malahelo ve aho fianarana? Tsoriko fa tsy tena nianatra na inona na inona aho tamin'ny fihaonambe lehibe izay mbola tsy nianarako tamin'ny Internet. Raha ny tena izy, amin'ny fifantohana amin'ny asan'ny mpanjifa sy ny valiny, azo inoana fa nianatra bebe kokoa aho tamin'ny alàlan'ny fihazonana ny lohako amin'ny lalao eto an-trano.
Hitako fa mampiala voly ireo mpanatrika ny kaonferansa, fa ny lalina sy ny antsipiriany matetika dia tsy ampy ampy amiko hametrahana ny fahitan'izy ireo miasa ao an-trano. Raha miteny amin'ny kaonferansa ianao dia izay no tanjonao… satria midika izany fa mety hanakarama anao ny iray amin'ireo orinasa mpihaino anao hifampidinika amin'izy ireo.
Skipping Konferansa - Ny ratsy
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny mpanjifantsika dia nivadika tamin'ny marika lehibe sy mpanjifa nasionaly. Mbola manao tetikasa iray aho miaraka Dell, saingy tsy fampiraisana mahazatra ho an'ny maso ivoho izany satria miara-mandray andian-dahatsoratra podcast izay hamoaka tsy ho ela aho. Raha ny marina, ny diako lehibe manaraka dia ny Dell EMC World. Nipoitra izany fotoana izany tamin'ny alàlan'ny mpiara-miasa iray izay niasa sy nandeha tany Dell, na izany aza, ka tsy tena isaiko amin'ity lahatsoratra ity.
Ny tsy fiasana amin'ny marika lehibe dia mampihena kely ny mombamomba anao ao amin'ny indostria. Mahatsiravina ny milaza azy io, fa ny orinasa any Midwestwest dia tsy miara-miasa amin'ireo masoivoho izay tsy miasa amin'ny marika lehibe. Soa ihany fa nanampy marika lehibe izahay mba hiheveran'ny olona anay tsara ao an-tanàna.
Aleo atrehana, ireo orinasa manatrika kaonferansa manana tetibola marketing. Raha ny tena izy dia kely dia kely ny fahaizana mitarika amin'ny kaonferansa… raha nandany vola an'arivony dolara tamin'ny tapakilan'ny fihaonambe ny orinasan-dry zareo dia takatr'izy ireo fa lafo tokoa ny fampiasam-bola amin'ny marketing. Afaka nihaona tamin'ny orinasa folo aho tamin'ny kaonferansa ary samy nanana teti-bola izy rehetra. Afaka mihaona amina orinasa folo ao an-trano aho ary ny iray amin'izy ireo dia manana teti-bola. Ny kaonferansa dia fampiasam-bola lehibe amin'ny tetikady varotrao.
Raha nilaza aho fa tsy nianatra na inona na inona tamin'ny fihaonambe, ny fotoana lavitra ny asa sy ny fianakaviana hifantohana is tsy hita. Nahita ny harivanay nipetraka teo amin'ny fisotroana niaraka tamin'ireo mpivarotra namako aho. Matetika izahay no nizara fahombiazana sy tsy fahombiazana izay tsy voatonona tamin'ny lahateny na famelabelaran-kevitra, ary ny fihainoana ireo fahamarinana ireo dia nampahery satria fantatrao fa tsy irery ianao tamin'ny tolona nataonao sy ny fahombiazanao.
Hitanao ve ny anarako, Douglas Karr, zaraina amin'ny lisitra ambony? Mahita ahy amin'ny podcast nasionaly ve ianao? Mahita ahy amin'ny tranonkala web nasionaly ve ianao? Tsia. Raha nitombo ny mpamaky anay an-tserasera, manohiza mahazo mpihaino marobe fanadihadiana amin'ny marketing, ary nandefa fahombiazana nahagaga Fiarahamonina Martech, Very ny taonina iray tamin'ny saiko iray izay nananako taloha.
Tsy isalasalana aho fa ny fanatrehana fihaonambe, ny fanohanana izany fihaonambe izany ary ny fisotroana zava-pisotro kely teo amin'ny fisotroana niaraka tamin'ny namako dia nahatonga ahy hisarika ny saina.
Mahatalanjona ny sisin-tany nomerika, saingy olombelona ny olombelona ary mbola mila mifandray amin'izy ireo mba hahatonga ny fahatsapana tsy mety maty. Na dia superstar ho an'ny alikako Gambino aza aho dia tsy tafiditra ao amin'ny ankamaroan'ny Top 100 an-tserasera tamin'ny taona lasa. Fony aho nanatrika kaonferansa dia voatanisa ao amin'ny Top 25 namako aho.
Ka… Zava-dehibe ve?
Ny zava-dehibe na tsia dia miankina amin'ny tanjonao. Raha ny fanekena azy rehetra dia eny. Raha resaka ego ny resaka rehetra dia eny tokoa. Raha momba ny fiasana amin'ny marika mombamomba azy io dia eny. Raha momba ny fihaonana amin'ireo mpitarika ao amin'ny indostranao ianao dia eny. Raha momba ny fianarana ny asa-tananao io? Meh.
Ho ahy manokana dia mbola tsy eo ny mpitsara. Tiako ny jiro, saingy tsy azoko antoka fa nisy dikany ara-bola be izany. Salama kokoa ny orinasako ankehitriny noho ny teo aloha. Ary, misy fiatraikany lehibe ao an-trano any Indianapolis, manangana studio ao amin'ny toeram-piaraha-miasa izay anoloranay mpampianatra tanora, fanomezana fotoana ho an'ireo mpianatra ao an-tanàna, ary fanampiana ireo tsy mitady tombom-barotra eto an-tanàna.
Tags: manatrika kaonferansafantatraLists-barotraKonferansa momba ny marketingmpitarika marketingmemelazapublictontolon'ny varotra sosialympivarotra ambony
Mar 22, 2017 amin'ny 10: 16 AM
Na eo aza ny fianarako bebe kokoa amin'ny Internet fa tsy amin'ny fihaonambe, tena tiako ny mandeha any amin'ny fihaonambe ary miaraka amin'ireo olona miteny ny fiteny marketing nomerika. Saika tsy nankany aminy mihitsy aho, satria lafo vidy tokoa.
Angamba raha nanao fitorahana bilaogy ampy momba an'io lohahevitra io aho mba hahazoako manaraka, dia HETSAHANA aho hanatrika sy hiteny fa tsy hikosoka ny carte de crédit hahafahako ho eo.
Mar 22, 2017 amin'ny 11: 21 AM
Tiako ny namaky an'ity Doug ity. Manana fahatsiarovan-tena tsara momba izay ilainao ianao, ary inona no ilain'ny orinasanao.
Mar 23, 2017 amin'ny 1: 31 AM
Misaotra Marty! Naharitra 8 taona fotsiny?
Mar 26, 2017 ao amin'ny 7: PM PM
Misaotra, Doug. Mpamily ho ahy hanatrika kaonferansa dia mpandahateny kalitao foana. Tamin'ny fotoana maro nifidianako ny hijanona ao an-trano dia nahangona dolara an'arivony tamin'ny fividianana ny bokin'izy ireo fotsiny aho - ireo famoahana izay niantoka ny fahamendrehan'ny tontonana. Mazava ho azy fa na dia tsy mahasolo ny tena zava-niainana sy ny tambajotra… dia tokony ho mendrika hodinihin'olona izany. Vokatr'izany dia tsapako fa manana loharano manankarena sy lalina izay azoko vangiana hatrany hatrany.